I-china ifilimu yokunamathela eshisayo ye-PES eshisayo yabakhiqizi bephaneli le-aluminium nabaphakeli | I-H & H.
Ubukhulu / mm 0.1 / 0.12 / 0.15
Indawo yokuncibilika 70-112 ℃
Isikebhe sokusebenza umshini wokucindezela ukushisa: 150 ℃ 8-12s 0.4Mpa
I-HD112 umkhiqizo owenziwe nge-polyester. Le modeli ingenziwa ngephepha noma ngaphandle kwephepha. Imvamisa kuvame ukusetshenziselwa ukumboza i-aluminium tube noma iphaneli. Sikwenza kube ububanzi obujwayelekile obungu-1m, obunye ububanzi kufanele benziwe ngendlela oyifisayo. Kunezinhlobo eziningi zokufaka isicelo zalesi sici. I-HD112 isetshenziselwa ukuhlanganisa izindwangu nezindwangu ezahlukahlukene, i-PVC, i-ABS, i-PET namanye amapulasitiki, isikhumba nezikhumba ezahlukahlukene zokufakelwa, imeshini, ucwecwe lwe-aluminium kanye namapuleti e-aluminium, kanye ne-veneer. Singenza lobo bukhulu be-100micron, i-120micron ne-150 micron.
Ifilimu le-HD112 elincibilikisayo elishisayo lisetshenziswa kakhulu esiqandisini i-evaporator lamination. Imvamisa into yokuvikela ngocwazi iphaneli ye-aluminium ne-aluminium tube ikakhulukazi kulabo i-aluminium enengubo ebusweni. Ngaphandle kwalokho, Ukushintsha ukunamathela kwendabuko kweglue, ukushisa okuncibilikayo kwefilimu okunamathiselwe kuye kwaba ubuciko obukhulu abakhiqizi abaningi be-elekthronikhi abamukelwa iminyaka eminingi. Le modeli iyathengiswa kakhulu eningizimu ye-Asia.
Ifilimu lokunamathela elishisayo le-PES lingasetshenziswa nakwezinye izindwangu zokunamathisela kanye nokuhlanganiswa kwensimbi.Isibonelo, ukubopha ukushisa kwamanye amahembe angenamthungo nezikhwama. Ngaphezu kwalokho, lo mkhiqizo ungasetshenziswa futhi kuzicelo zangaphakathi zezimoto, njengokuhlanganiswa okushisayo kwamata omoto, ukufakwa neminye imikhiqizo. Ifilimu ye-PES inezinhlobonhlobo zezicelo, noma ngabe izindwangu zendwangu noma izinto zensimbi, ukusebenza kwe-bonding kuhle kakhulu.
Langaphambilini Ifilimu le-PO elishisayo lokunamathisela i-evaporator yesiqandisi
Olandelayo: Ifilimu lokunamathela elishisayo le-PES
PO hot ncibilika Yesigcilikisha ifilimu esiqandisini eva ...